युवतीमाथि किन प्रहार हुन्छ एसिड ?
चार वर्षअघि काठमाडौंको वसन्तपुरमा भएको एसिड प्रहारको घटनालाई सम्झाउने गरी बुधबार राति कालोपुलमा २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि एसिड प्रहार भयो । राति झन्डै साढे सात बजे डेराबाहिर बोलाएर विष्णु भुजेलले एसिड छ्यापेका थिए । प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई काँडाघारीस्थित एक भट्टीमा रक्सी पिइरहेको अवस्थामा राति १० बजे पक्राउ गरेको थियो ।
युवतीमाथि एसिड प्रहार : के भन्छिन् आमा ? (भिडियो)
महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीमा भेट्दा जेनीकी आमा कमला खड्का भावविहल अवस्थामा थिइन् । शब्द पनि घाँटीमै अड्किएजस्तो उनी बोल्नै सकिरहेकी थिइनन् ।अघिल्लो दिनको घटनापछि उनी रातभर अस्पतालमा छोरीलाई रुगेर थप कानूनी प्रक्रियाका लागि बिहीबार बिहानै कमलपोखरी वृत्त आएकी थिइन ।
राजधानीको कालोपुलमा आमा र बहिनीसँग डेरा गरी बस्ने २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि बुधबार एसिड प्रहार भएको छ ।
फिल्मफेयरमा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड आलिया भट्टले जितेपछि खाली हात भएकी ‘पद्मावत’ अभिनेत्री दीपिका पादुकोणका लागि फिल्मको प्रस्तावले भने हात खाली हुनुपरेको छैन ।
ससुरालीमै पुगेर श्रीमतीमाथि एसिड
पोखराका एक व्यक्तिले माइती बस्दै आएकी श्रीमतीमाथि ससुरालीमै पुगेर एसिड प्रहार गरेका छन् ।
बहालवाला प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) ले महिलामाथि एसिड प्रहार गरे भनिएको घटनालाई अदालतले कुटपिट ठहर गरेको छ ।
प्रहरीले महिलामाथि एसिड प्रहार गरे भनिएको घटना अदालतबाट कुटपिट ठहर
बहालवाला प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)ले महिलामाथि एसिड प्रहार गरे भनिएको घटनालाई अदालतले कुटपिट ठहर गरेको छ ।
एसिड प्रहारबाट बालक सख्त घाइते
अज्ञात युवाहरुको एसिड प्रहारबाट १४ वर्षीय बालक घाइते भएका छन् । उनको उपचार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ ।